I-PlayStation 4 kunye ne-Xbox One S zinokuhla kwixabiso kulo nyaka | Iindaba zeGajethi
I-PlayStation 4 kunye ne-Xbox One S zinokuhla kwixabiso kulo nyaka
Nangona kubuhlungu, amaphulo okuthengisa akutshanje ePlayStation 4 Slim kunye neXbox One S ayeza, ngakumbi ngokuthanda oodade wabo abadala I-PlayStation 4 Pro kunye neXbox One X, eya kuthi iphele ngaphandle koncedo ngokunciphisa amaxabiso ezona modeli zisisiseko, oko ke kukonyusa ukuthengisa kunye nokubeka elona nani likhulu leeyunithi kuwo onke amakhaya emhlabeni.
Kolu luhlu lwezinto, njengoko besitsho kwiTurtle Beach, iPlayStation 4 Slim kunye neXbox One S banokuthi babonise izibonelelo ngamaxabiso ancitshisiweyo ngokuphela konyakaNgokukodwa ngakumbi kwimikhankaso yeKrisimesi enika umdla kunye neepakethe.
Le yindlela abanika ingxelo ngayo Ufudo Beach, Kubonakala ngathi zizinto ezisengqiqweni ukuba sithathela ingqalelo iphulo kunye nokunikezelwa ebusweni bokuthengisa iimveliso ezintsha.
Nangona ayisiyonto esinokuyiqinisekisa ngokucacileyo, siyakholelwa ukuba ukukhutshwa kwezinto ezintsha ezinje ngePlayStation 4 Pro kunye neXbox One X nako kunokuphucula intengiso, ngakumbi njengoko isenza kube lula ukwehlisa ixabiso leemodeli ezingabizi zeXbox One kunye nePlayStation 4.
Oko ke kukujoyina ukubikezela kukaMichael Patcher, oxele kwangaphambili kakhulu ukuba iPS4 Slim iza kuhlala kuyo 250 euroNgelixa iPS4 Pro iza kuhla iye kwi Ama-euro angama-350 ekupheleni kwalo nyaka. Ukuba uyathandabuza, iya kuba ziindaba ezimnandi kumakhaya angaphezu kwelinye ukuba ungafumana ukonga kancinane xa ujonga imisebenzi yesiqhelo yeKrisimesi, kwaye zimbalwa izipho eziza kukwenza wonwabe njengekhonsoli elungileyo onokuyonwabela ngayo iiholide zasebusika .
Mhlawumbi IGran Turismo Sport kwimeko yePlayStation 4 Yiba sisizathu esifanelekileyo sokukhuthaza iiphakeji ezinemidlalo kunye nekhonsoli ngesandla ngexabiso elingenakubethwa. Kuya kufuneka silinde ukuyibona ngamehlo ethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » I-PlayStation 4 kunye ne-Xbox One S zinokuhla kwixabiso kulo nyaka
UDani Garcia Bautista sitsho
UJorge Garcia Fernandez
Phendula kuDani García Bautista
Ukubaluleka kokuma ngokuchanekileyo xa usebenzisa iPC